पक्कै छैन. हामी तंत्र सामना आवश्यक छैन, झूटा देवताहरूको, र आत्म-सुखदायक विधिहरू. हामी त्यहाँ बारी छैन. पनि समस्याहरूको बीचमा हामी सबै पाउन सकिन्छ हामी परमेश्वरको आवश्यक.
अब मलाई थाहा हामी ख्रीष्टियनहरू परमेश्वरको पर्याप्त छ कि सबै समय भन्न सुन्न, परमेश्वरले हामी आवश्यक सबै छ कि, तर यो सधैं वास्तविक लाग्छ. यो साँच्चै अर्थ के? हामी एक पतित संसारमा, ठूलो मुद्दाहरू संग. त्यसैले परमेश्वरले हाम्रो आवश्यकता सबै कसरी पूरा गर्दैन? यो के जस्तो देखिन्छ, व्यावहारिक, हुँदा पनि सबै हाम्रो वरिपरि तल दुर्घटनाग्रस्त छ?
समस्या र दुःखको यस प्रकारको छैन विदेशी परमेश्वर वा उहाँको वचन छ. हामी गत हप्ता देखि भजन मा देख्यो र हामी धेरै अर्को भजन फेरि यो हप्ता यो देख्नुहुनेछ, अध्याय 142. दाऊदले साथै यो भजन लेखे. अनि हामीले दाऊदको यो प्रार्थनामा देख्नुहुनेछ विचलित छ, असहाय, लागिपरेको मदतको लागि बाहिर रो.
हामी हुनत पाठ पढ्न अघि, म केही पृष्ठभूमि दिन चाहनुहुन्छ. हामी पुस्तकमा दाऊदको जीवनको कथा हेर्न 1 शमूएल.
दाऊदले संसारको इतिहासमा सबैभन्दा प्रसिद्ध मानिसहरू मध्ये एक छ. उहाँले शायद गोल्यतलाई आफ्नो scrappy हार लागि सबै भन्दा प्रसिद्ध छ. उहाँले मूलतः बस उसलाई केही चट्टानहरु फाले र उसलाई slayed. जब दाऊदले गरे, शाऊलले अझै पनि राजा थियो. तर इस्राएली मानिसहरू दाऊदको धेरै प्यारो गर्ने बनेर थिए. तिनीहरू पनि त्यो थियो कसरी अचम्मको बारेमा गीतहरू गाया, शाऊलले तिनलाई तुलना. उहाँले राजा भन्दा अधिक लोकप्रिय थियो, र राजा यो मन थिएन. उहाँले गोल्यतलाई मारे अघि उहाँले राजा शाऊलको आशिष् थियो त्यसैले पनि, अब शाऊलले आफ्ना शत्रुको रूपमा दाऊदले देख्यो. अनि उहाँले उसलाई मार्न आफूले सकेजति सबै गर्न थाले. त्यसैले दाऊदले यो भजन लेख्छन् गर्दा, उहाँले रन मा छ. उहाँले भगुवा मा बन्द गरिएको जसले एक युद्ध नायक छ. राजा प्राथमिकता आफ्नो सूची मा दाऊदले नम्बर एक को मृत्यु बनाएको छ. यो राजा र आफ्नो सम्पूर्ण सेना विरुद्ध दाऊदको.
र यति भजन यहाँ 142 हामी दाऊद फेला, एक गुफा बाहिर लुकाउने. उहाँले आफ्नो जीवन लागि डर, र यो परमेश्वरको बाहिर रुन्छिन् भन्ने दुःखको मा छ.
म प्रभु गर्न ठूलो स्वरले; म कृपा लागि प्रभु मेरो आवाज उठाउनुहोस्। म उसलाई पहिले मेरो उजुरी पोखाउनुहोस्; उहाँलाई अघि म मेरो समस्या बताउनुहोस्। जब मेरो आत्मा मभित्र बेहोश बढ्छ, यो मेरो उपाय तपाईं छ। म कहाँ मानिसहरू हिंड्न बाटो मा मेरो लागि पासो लुकेको छ। मेरो दाहिने हेर्न र देख्न;कुनै एक मेरो लागि चिन्तित छ। म कुनै शरण छ;कुनै एक मेरो जीवन फिक्री गर्नुहुन्छ। म तपाईंलाई रुन, हे प्रभु; म भन्छु, "तपाईं मेरो शरणस्थान हो,जीवित देशमा मेरो भाग। "मेरो कराउँदै सुन्नुहोस्,म लागिपरेको आवश्यकता छु; मलाई पछि लाग्न गर्नेहरूलाई मलाई उद्धार,तिनीहरूले मलाई लागि पनि बलिया हुन्छन्. मलाई मेरो जेलबाट, म आफ्नो नाम प्रशंसा गर्न सक्छ भन्ने. त्यसपछि धार्मिक किनभने मलाई आफ्नो भलाइको मेरो बारेमा भेला हुनेछ. (भजन 142, रूपान्तरित)
हामी यो पाठलाई हिंड्न जाँदै हुनुहुन्छ. र हामी दाऊद यो प्रार्थनामा हामी परमेश्वरबारे सिक्न बारेमा चार विशिष्ट कुराहरू विचार गर्न जाँदै हुनुहुन्छ. र हामी यसलाई माध्यम हिंड्दा, हामी देख्नु पनि भयानक समस्या को समयमा, हामी परमेश्वरको आवश्यक सबै पाउन सक्नुहुन्छ. हामी देख्न पहिलो कुरा परमेश्वरको समस्या को समयमा हाम्रो मित्र हो भन्ने छ.
म. परमेश्वरको समस्या को समय मा हाम्रो मित्र हो
एक. परमेश्वरको फिक्री गर्नुहुन्छ
दाऊदले प्रार्थना बाटो परमेश्वरको सुन्नुहुन्छ भन्ने धारणा मा खण्डमा. उनी परमेश्वर तथा परमेश्वरको वास्तवमा आफ्नो जीवन मा के गइरहेको ख्याल गर्नुहुन्छ भनी एक सम्बन्ध छ भनेर मान्छ. तपाईं यसलाई सोच्न जब यो वास्तवमा धेरै उल्लेखनीय छ. ब्रह्माण्डको परमेश्वरले यस गोठालो भगुवा ख्याल गर्नुहुन्छ. Skeptics हाम्रो समस्याहरूको बारेमा परमेश्वरले मायालु साँच्चै कुरा छैन कि लाग्छ वा फरक धेरै बनाउन सक्छ. कसले अदृश्य मित्र आवश्यक, जब आफ्नो जीवन मा सबै अराजकता छ? तर तिनीहरू एकदमै गलत हुन चाहन्छु. परमेश्वरको मित्र छ भन्ने तथ्यलाई, उहाँले चासो राख्नुहुन्छ भनेर, संसारमा सबै फरक पार्छ. जब तपाईं यसको बारे तिनीहरूलाई बताउन आफ्नो अवस्था तिनीहरूले प्रतिक्रिया कसरी परिवर्तन बारे वा छैन कसैले चासो राख्नुहुन्छ.
जस्तै, मेरो केबल बाहिर गए भने के के थियो, र सट्टा मेरो केबल कम्पनी कल को इन्टरनेट प्रदायक भनिन्छ. खैर म कल र मेरो केबल तिनीहरूलाई मुद्दा सबै बताउन सक्नुहुन्छ. म तिनीहरूलाई सम्झाउन म एक विश्वासी ग्राहक भएको छु कसरी, र म यो atrocious सेवा मा कसरी appalled हुँ तिनीहरूलाई प्रभावित. तर म गलत नम्बर भनिन्छ किनभने, तिनीहरूले मतलब छैन. र तिनीहरूले यसको बारेमा केहि गर्न प्रयास गर्न जाँदै हुनुहुन्छ. वास्तवमा म सही नम्बर कल गर्दा पनि मतलब छैन राम्रो पक्का छु, र तिनीहरूले कहिल्यै यसको बारेमा केहि, तर तपाईं म भन्दै छु के प्राप्त. यो कसैले चासो राख्नुहुन्छ वा छैन मामलाहरु.
अब म परमेश्वरले हाम्रो समस्याहरूको ख्याल भने होइन जस्तो हुनेछ के कल्पना गर्न चाहनुहुन्छ. सबै दिन लामो हामीलाई परमेश्वरको पुकारा सक्छ, तर यो सबै कुनै फरक छैन. यो परमेश्वरको ख्याल राख्नुहुन्छ विषयहरूमा भने दाऊद सोध्छन्. पद एक मा नजर.
म प्रभु गर्न ठूलो स्वरले; म कृपा लागि प्रभु मेरो स्वर उचाली. म उसलाई पहिले मेरो उजुरी पोखाउनुहोस्; उहाँलाई अघि म मेरो समस्या बताउन.
यो जरुरी खतरा एक मानिस छ. आफ्नो जीवन jeopardy छ. उहाँले एक जल भवन मा जस्तै यो छ. उहाँले बन्दुक संग गुंडे द्वारा खेदे भइरहेको जस्तो यो छ. अनि उहाँले उत्कट मदतको लागि बाहिर रो गर्नुपर्छ. म गुफा मा दाऊदले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले यो प्रार्थना प्रार्थना रूपमा डराएको.
दाऊदले प्रार्थना रूपमा, उहाँले परमेश्वरले आफ्ना मित्र छ र उहाँले चासो राख्नुहुन्छ भनेर बुझ्नुहुन्छ. अनि त्यो सत्य उहाँले प्रार्थना बाटो ड्राइव.
उहाँले परमेश्वरको सुनिरहेको छ थाह. पद छ हेर. उस्ले भन्यो, "म लागिपरेको आवश्यकता छु मेरो कराउँदै सुन्नुहोस्।" अब मलाई लाग्छ छैन यो उसलाई परिवर्तन को लागि यसलाई स्विच र सुन्न परमेश्वरको विश्वस्त गर्न प्रयास गर्दै छ. दाऊदले भजनहरूमा भन्दा र माथि यो भन्छन्. म दाऊदले छ लाग्छ, "तपाईं हामी तपाईंलाई कुरा गर्दा आफ्नो मान्छे सुन्न प्रतिज्ञा गर्नुभएको. त्यसैले मलाई सुन्न. म कुरा गर्दै छु। "उहाँले काँध मा उहाँलाई ट्याप थियो जस्तो छ. जस्तै, "प्रभु, आफ्नो प्रिय सुन्न. म भन्न केही छ। "
दाऊदले परमेश्वरको ट्रयाक रेकर्ड थाह थियो. उहाँले परमेश्वरको यो मान्छे संग एक करार गरे भनेर थाह थियो. उहाँले परमेश्वरले तिनीहरूलाई साथ दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो थाह थियो. उहाँले परमेश्वरले तिनीहरूको प्रार्थना सुनेका कसरी थाह थियो र तिनीहरूलाई माथि र फेरि बुझाइएको. अनि उहाँले यो परमेश्वरले उहाँलाई साथै यस समयमा सुन्न भनेर अपेक्षा.
क्रिश्चियन, तपाईं यो ज्ञानले प्रार्थना गर्छन्? वा के तपाईं शब्दहरुको भन्दै हुनुहुन्छ कल्पना गर्छन्? तपाईं परमेश्वरको लक्षित हेरविचार को एक अर्थमा प्रार्थना र तपाईं को लागि प्रेम गर्छु? प्रार्थना परमेश्वरले एउटा वास्तविक अन्तरक्रिया छ वा तपाईं बस छत मा अप शब्द फालिएको छन्? यो सिर्फ एक अनुष्ठान छ? यो परमेश्वरको गर्ने फिक्री गर्नुहुन्छ मित्र छ विषयहरूमा.
हामी दाऊद प्रार्थना बाटो सिक्न सक्छौं. दाऊदले वास्तवमा परमेश्वरको आफ्नो उजुरी airing छ. अब हामी धर्मशास्त्र परमेश्वरले हामीलाई आज्ञा मा भुनभुनाना कि छैन र गुनासो थाहा. तर यहाँ दाऊदले हामीलाई हाम्रो उजुरी आवाज सही बाटो देखाउँछ. उहाँले भुनभुनाना छैन र उजाडस्थानमा इस्राएलीहरू जस्तै विरुद्ध गुनासो. उहाँले प्रश्न परमेश्वरको चरित्र वा न्याय राख्दछ तरिकामा गुनासो छैन. उहाँले परीक्षण परमेश्वरको राख्नु छैन.
उहाँले वास्तवमा विपरीत गर्छ. हामी भजन पछि देख्नुहुनेछ दाऊद परमेश्वरको भलाइ कुरोलाई पुष्टि. यो परमेश्वरको आफ्नो उजुरी हावा गर्न ठीक छ, तर उहाँलाई पूर्ण विश्वस्त यसलाई के. यो परमेश्वरको बताउन तपाईं कुनै न कुनै समय भएको ठीक छ. तर हामी हुनुको अन्यायपूर्ण उहाँलाई दोष गर्दा - बाहिर चर्को कि वा हाम्रो हृदयमा - कि यो पाप हुँदा छ.
तर प्रार्थना कहिलेकाहीं बुझ्न कठिन छ. एक Rapper, भनिन्छ एउटा गीत मा प्रिय परमेश्वरको, यो जस्तै प्रार्थना बारेमा कुरा.
"म उहाँले व्यस्त छ लाइन कृपया / मलाई पागल कल म उहाँले पढ्न मन सक्छ शायद लाग्यो पकड लाग्छ।"
उहाँ राम्रो बिन्दु ल्याउँछ. परमेश्वरको तपाईंले पहिले नै उहाँलाई बताउन अघि तपाईं सोच हुनुहुन्छ के थाह. परमेश्वर सबै कुरा थाह छ भने, उहाँलाई बताउन को बिन्दु के? यो अनुशासन बस एक व्यायाम छ? यो मुख्य लक्ष्य परमेश्वरको साथ आफ्नो इच्छा aligning छ भने मसीहीहरूले प्रार्थना कुरा गर्दा मलाई bothers. त्यो सत्य हो.
उहाँले हामीलाई सुन्नुहुन्छ किनभने हामी उसलाई भन, उहाँले हामीलाई देखि सुनवाई रमाउनुहुन्छ, र उहाँले ख्याल राख्नुहुन्छ र उहाँ सधैं प्रेम प्रतिक्रिया (भनेर थप पछि). तर कृपया परमेश्वरले तपाईंको समस्याहरूको नभन्नुहोस्. उहाँलाई पुकारा. आफ्नो उजुरी बाहिर लागि. आफ्नो आवाज उचाल्नु. यहाँ दाऊदले सिक्न.
उहाँले जाँदै राख्छ. उहाँले पद तीन भन्छन् के हेर.
जब मेरो आत्मा मभित्र बेहोश बढ्छ, यो मेरो उपाय तपाईं छ. म कहाँ मानिसहरू हिंड्न बाटो मा मेरो लागि पासो लुकेको छ.
दाऊदले जताततै देख्यो, शाऊलले तिनलाई लागि snares लुकाइरहेको थियो. दुई पटक उहाँले उसलाई लागि वीणा प्ले गर्दा उहाँलाई मार्न प्रयास. उहाँले उसलाई भाला फाले र पर्खाल उसलाई पिन प्रयास. शाऊलले तिनलाई जानबूझ आफ्नो छोरी दिए, उहाँलाई पासो रूपमा. उहाँले आफ्नो छोरा विश्वस्त गर्न प्रयास, दाऊदको BFF, उहाँलाई मार्न. र अब शाऊल र तिनका सेनाले उहाँलाई पछि लाग्दा छन्. त्यहाँ हरेक पालो मा खतरा छ.
मलाई थाहा हामी यहाँ दाऊदलाई बताउन सक्नुहुन्छ जस्तै हामीलाई केही महसुस. हामी त्यहाँ समस्या पालो जहाँ हामी कुनै कुरा जस्तै महसुस. जस्तै हाम्रो सम्पूर्ण जीवन भद्रगोल हो हामी महसुस. हामी दुःखित छौं किन कि छ. दाऊदले कसरी महसुस यो छ.
तर उहाँले आफ्नो आत्मा बेहोश हुँदा भन्दै गर्नुपर्छ, जब आफ्नो आत्मा कमजोर छ, जब उहाँले अभिभूत छ, यसलाई आफ्नो बाटो चिन्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ. जसले के उहाँले मार्फत गइरहेको थाह परमेश्वरको.
पद चार उहाँले जाँदै के बारे परमेश्वरको बताउन रहन्छ.
मेरो दाहिने हेर्न र देख्न; कुनै मलाई फिक्री छ. म कुनै शरण छ;कुनै एक मेरो जीवन ख्याल राख्नुहुन्छ.
घ. कुनै एक तर परमेश्वरले
दाऊदले आफ्नो पत्नी अलग र आफ्नो सबैभन्दा मिल्ने साथी अलग छ, जोनाथन. उहाँले राज्य मा अवांछित छ. कसैले उहाँलाई फिक्री गर्नुहुन्छ जस्तै उहाँले महसुस, जस्तै कसैले उहाँलाई बचत गर्न सक्नुहुन्छ. यद्यपि उहाँले परमेश्वरको सामु जान्छ. परमेश्वरले आफ्ना मित्र छ दाऊदले थाह छ र परमेश्वरले उहाँलाई हेरचाह गर्नुहुन्छ भन्ने.
मित्र तपाईं आफ्नो पीठ गरिएका छन् जब बनाउँछ भन्ने के फरक. र परिवार तपाईं shunned छ. र सह-कामदारहरूको तपाईं ख्याल छैन. र आफ्नो छिमेकी पनि तपाईं हुन् थाहा छैन. परमेश्वरले तपाईंलाई थाह छ र परमेश्वरले तपाईंलाई हेरचाह गर्नुहुन्छ. परमेश्वरले तपाईंको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ. परमेश्वरले आफ्नो टाउको मा हो कति hairs थाह. उहाँले तपाईंलाई अनुभव गरिरहेका छौं दुखाइ र उथलपुथल थाह. र यो अर्थमा, येशूले मा विश्वासीले एक्लै कहिल्यै छ.
अक्सर हामी अन्य मानिसहरूले याद गर्न प्रयास हाम्रो जीवन खर्च, आफ्नो ध्यान र आदर चाहने. हामी तिनीहरूलाई हामीलाई ख्याल गर्न चाहनुहुन्छ. परमेश्वरको ख्याल राख्नुहुन्छ! कुनै रिमोट द्वीप वा त्यागेर भवन जहाँ विश्वासीले एक्लै हुनेछ छ. परमेश्वरको तपाईं संग छ. र उहाँले तपाईंलाई प्रेम गर्नुहुन्छ. अनि उहाँले ख्याल राख्नुहुन्छ.
सत्यता, परमेश्वरको बिना आफ्नो मित्र रूपमा त्यागेर हुनेछ. यो depressing हुनेछ यो भजन यहाँ समाप्त यदि. र संसारको बिलौना थुप्रै त्यहाँ अन्त गर्छन्. तर दाऊदले सबैभन्दा एक्लै र त्यागेर महसुस हुँदा पनि थाह, परमेश्वरको ख्याल राख्नुहुन्छ. र उहाँले कसैले उहाँलाई हेरचाह गर्न उहाँले आवश्यक छ कि जब थाह, उहाँले परमेश्वरको चलान गर्नुपर्छ.
त्यसैले हामी परमेश्वरको आवश्यक सबै पाउन सक्नुहुन्छ, हुँदा पनि यसलाई कुनै न कुनै छ. तर पक्कै पनि हाम्रो मित्र परमेश्वरको हामी आवश्यक सबै छैन.
द्वितीय. परमेश्वरको समस्या को समय मा हाम्रो सुरक्षा हो
म त्यो पद चार भन्छन् थप एक कुरा गर्न आफ्नो ध्यान चाहन्छन्. उस्ले भन्यो, "म कुनै शरण छ।" अब हामी जब शब्द शरण सुन्न, हामी स्वचालित रूपमा यो metaphorical अर्थमा जाने. उहाँले आफूले सञ्चालन गर्न कुनै एक छ मतलब लाग्छ. उसले यहाँ अर्थ के होइन. उहाँले म कुनै घर छ मतलब. म कुनै आश्रय छ. म सुत्न कतै छ. म शाब्दिक शारीरिक उजागर छु. उहाँले एक मोटेल मा जाँच को विकल्प छैन 6. जसमा उनले एक गुफा बाहिर लुकाउने छ किन गर्नुपर्छ.
त्यसैले हामी परमेश्वरको आवश्यक सबै पाउन सक्नुहुन्छ? परमेश्वर हाम्रो निम्ति एक घर हुन सक्छ? पद पाँच हेर.
म तपाईंलाई रुन, हे प्रभु; म भन्छु, "तपाईं मेरो शरणस्थान हो,जीवित देशमा मेरो भाग। "
उसले भन्दै थियो, म एक मित्र छैन, तर तिमी मेरो साथी हुनुहुन्छ. म सुन्न कसैले छैन, तर तिमी मलाई सुन्न छौँ. म एक caregiver छैन, तर तिमी मलाई हेरविचार छौँ. अब उहाँले यसो गर्नुपर्छ, म कुनै पनि आश्रय छैन, तर तपाईं मेरो आश्रय हुनुहुन्छ. तपाईं मेरो शरणस्थान हुनुहुन्छ.
म यो प्रवचन मा काम थियो, जबकि म साँच्चै यो पद मा जूम. म यसलाई एक प्यारा कफी कप पद भन्दा हामीलाई बढी हुन चाहन्थे. के यो साँच्चै वास्तविक जीवनमा मतलब?
हामी भजन मा गत हप्ता यस शरण भाषा देखे 141 धेरै. र हामीले पनि धर्मशास्त्रको भन्दा यो सबै हेर्नुहोस्. उहाँले परमेश्वरले आफ्नो शाब्दिक शारीरिक आश्रय छ भन्दै होइन. तर उहाँले भौतिक आश्रय आफ्नो कमी बीचमा भन्दै छ, परमेश्वरले उहाँलाई लागि आश्रय अर्कै छ. परमेश्वरले आफ्नो शरणस्थान हुनुहुन्छ.
परमेश्वरले तपाईंको शरण हुन लागि यो मतलब के? म यसलाई उहाँले बाहिर संसारमा तपाईं खतरामा सबै कुराहरू तपाईंको सुरक्षा हो अर्थ लाग्छ. तापनि हामी हाम्रो घरमा सबै किसिमका सुखसुविधा र मनोरंजन संग पृथ्वीमा आफ्नै सानो आकाश मा गर्नुभयो, सुरक्षा अनिवार्य आश्रय उद्देश्य छ. यो हानिबाट हाम्रो रक्षा गर्न छ - मौसम देखि, चोर देखि, आक्रमणकारीले देखि.
उहाँले गुफा हुँदा दाऊदले यस्तो लेखे अर्को भजन भन्छन् के सुन्न.
मलाई कृपालु, हे परमेश्वर, मलाई कृपालु, लागि मेरो प्राण शरण लिन्छ; आफ्नो पखेटा को छाया मा म शरण लिन हुनेछ,द्वारा विनाश पास को आँधीबेहरी सम्म. (भजन 57:1)
उहाँले परमेश्वरको मा लुकाउन हुनेछ दाऊदले छ. परमेश्वरले विनाश आफ्नो सुरक्षा हो. थप विशेष, उहाँले परमेश्वरको मा भन्दै गर्नुपर्छ आफ्नो प्राण शरण लिन्छ. उहाँले छ जो को गहिरो भागलाई, आफ्नो कोर मा, उहाँले परमेश्वरको आफ्नो शरण पाता.
परमेश्वर हुनुहुन्छ आफ्नो आज शरण? के तपाईं सुरक्षाको लागि भरोसा छन्? आफ्नो जीवनमा के छ, तपाईं यो गुमाए भने तपाईं उजागर कि हुनेछ महसुस र विनाश गर्न खुला? यसलाई आफ्नो पैसा छ? यसलाई आफ्नो स्थिति छ? राम्रो अझै, जहाँ तपाईं समस्या को समयमा चलाउनु? कहाँ के तपाईं सुरक्षित महसुस गर्छन्? त्यो सम्बन्ध वा त्यो काम छ? त्यसो भए, त्यसपछि परमेश्वरले आफ्नो शरणस्थान हुनुहुन्छ जस्तै आवाज छैन.
परमेश्वरको बनाउन आफ्नो शरण हृदयका एक मुद्रा छ. यो हाम्रो सुरक्षा परमेश्वरको मा एक गहिरो विश्वास छ. यो परमेश्वरको हामी सुरक्षित छन् भनेर थाह पाउँदा गर्नुपर्छ. आफ्नो जीवन खतरामा छ दाऊदले थाह, र उहाँले दुःखित छ, अहिलेसम्म उहाँले सुरक्षित महसुस. हुन कस्तो अनौठो ठाउँमा, अहिलेसम्म यो जहाँ एक पतित संसारमा हरेक विश्वासीले आफूलाई पाउन गर्नुपर्छ छ. पीडित, अहिलेसम्म शान्तिपूर्ण. उदास, अझै सधैं आनन्दित.
अब म भन्दै छु, कि परमेश्वर हाम्रो सुरक्षा हो किनभने, उहाँले हामीलाई कुनै पनि परीक्षा संग मारा गर्न अनुमति छैन? हुँदै हैन. यस किसिमले बारेमा सोच्नुहोस्.
म आज लगाएका छु यो घडी पनरोक छ. मतलब अहिले म व्यञ्जन धोइदिनुभएर छु गर्दा कि यदि म वर्षा मा बाहिर हिंड्न वा यसलाई छोड्न, यो भिजेको प्राप्त हुनेछ. के यो मतलब हेर्ने गर्छ भने पनि भिजेको प्राप्त छ, यो नष्ट हुनेछ. यो विश्वासीले लागि समान छ. परमेश्वर तूफान मा रहेको हामीलाई राख्न प्रतिज्ञा छैन, तर उहाँले हामी नाश हुनेछैन भन्ने प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ. हामी आँधी द्वारा मारा प्राप्त गर्न सक्छन्, तर हामी नष्ट गर्न सकिन्छ.
त्यसको मतलब के हो? रोमी 8 हामी हाम्रो भइरहेको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा भयानक कुरा बाहिर कर्तुतहरूलाई उदाङ्ग, सहित मृत्यु. र यो पनि यी सबै कुराको माझमा भन्छन्, हामी जसले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ ख्रीष्टमार्फत विजयी भन्दा बढी हुनुहुन्छ. रोमी 8 पनि सबै परमेश्वरको प्रेम र उहाँको उद्देश्य अनुसार भनिन्छ गर्नेहरूलाई असल लागि बाहिर हुनेछ भनी बताउँछ.
त्यसैले हेर्न, हाम्रो सुरक्षा रूपमा, हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई सबै कुरा जोगाउनेछ हाम्रो हानि वा विनाश लागि अन्त मा बाहिर बारी हुनेछ. र हामीलाई सान्त्वना गर्नुपर्छ. हामी उहाँले दिन्छ भने थाहा किनभने यसले हामीलाई मारा, यो हाम्रो असल र उहाँको महिमा लागि हो. उहाँले हाम्रो सुरक्षा हो. त्यसैले दाऊदले जस्तै, "कसले शारीरिक आश्रय आवश्यक, जब म परमेश्वरको छ!"परमेश्वर हाम्रो सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता छ, र जब कि एउटा आवश्यकता पूरा, सबै अरूलाई धेरै सानो हेर्न.
जहाँ तपाईं भयभीत समयमा चलाउन त्यसैले फेरि म सोध्न? म आज यहाँ दुवै मसीहीहरूले सोधेर र गैर-मसीही गर्न छु. जहाँ तपाईं चलाउनु? हामी धेरै गलत कुराहरू चलिरहेको छ. हामी झूटा shelters गर्न चलाइराख्नु. र इमानदार हुन, कि मूर्ख छ. कुनै कुरा छ कि झूटो आश्रय छ के, चाहे त्यो एक व्यक्ति वा एक लत - यो खतरनाक छ. झूटा shelters हामीलाई झूठ. तिनीहरू सुरक्षित जस्तो, तर अन्त मा उनि मात्र हामीलाई थप छोड्न उजागर. तिनीहरूले विनाश हामीलाई सुरक्षा छैन.
व्यवस्थामा, मोशाले परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूको मूर्तिपूजा प्रतिक्रिया कसरी बताइएको.
त्यसपछि उहाँले भन्न हुनेछ, “आफ्नो देवताको कहाँ छन् [आफ्ना मूर्तिहरू कुरा], तिनीहरूले शरण लिए जसमा चट्टान… तिनीहरूलाई खडा गरौं र तपाईंलाई मदत; तिनीहरूलाई आफ्नो सुरक्षा गरौं।” (व्यवस्था 32:37)
परमेश्वरको मान्छे अन्य राष्ट्रहरूले आक्रमण गरेका थिए, तिनीहरूका झूटा shelters - - र झूटा देवताहरूको तिनीहरूले आशा राख्नु तिनीहरूलाई रक्षा गर्न सक्षम थिए. आफ्नो गल्ती नगर्नुहोस्.
साथै, तपाईं यो समय जब बस परमेश्वरले आफ्नो शरणस्थान बनाउन सक्छौं सोच को गलती छैन. यो खराब हुन्छ नभएसम्म बस प्रतीक्षा छौँ र त तपाईं परमेश्वरको मा लुकाउन छौँ. त्यो सबै कुनै अर्थमा बनाउँछ. तूफान एक घर निर्माण गर्न नआउञ्जेल पर्खनु छैन. तपाईं घरमा बस्ने, र तपाईं यसलाई वर्षा सुरु गर्दा सुरक्षित हुनुहुन्छ. तपाईं आतंक छैन यो drizzling सुरु गर्दा, तपाईं पहिले नै उहाँलाई आफूलाई लुकेको गर्नुभएको किनभने. पाप देखि खोल्दै र उहाँमाथि भरोसा सुरु, के तपाईं उहाँको धार्मिक क्रोध सुरक्षित हुनेछ भनेर. र यो दिन पछि दिन पछि फिर्ता उहाँलाई दिन चलिरहेको द्वारा जारी.
हामी परमेश्वरको सुरक्षा कुरा अब रूपमा, हामी एक जोडी दिन पहिले एक भयानक कुरा Newtown मा भयो भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन, कनेक्टिकट. एक स्कूल मा आम आक्रमण अर्को एउटा. यो धेरै युवा बच्चाहरु पाँच र छ वर्ष को बच्चाहरु थियो. त्यो हामीलाई रिस र हामीलाई सन्ताप गर्नुपर्छ. र यो जस्तै विपत्ति आइलाग्यो मान्छे प्रश्न बनाउन.
क्रिश्चियन, के तपाईं काम मा आफ्नो मित्र भन्न कसले भन्छ जाँदैछन्, "आफ्नो परमेश्वर कहाँ यो बीचमा थियो? किन ती निर्दोष बच्चाहरु छैन रक्षा गरे? उहाँले किन भनेर के गरौं गरे?"तपाईं के गर्न भन्छौ?
म के भन्नुहुन्छ? म भन्न चाहन्छु लाग्छ, मलाई थाहा छैन. किन मलाई सट्टा? मलाई थाहा छैन. म दुष्ट को समस्याको बारेमा केही दार्शनिक जवाफ दिन चाहँदैनन्. कुनै एक सुन्न चाहन्छ. म सिर्फ म किन थाहा छैन भन्नुहुन्छ लाग्छ, तर म परमेश्वरको थाह. अनि उहाँले राम्रो. किन उहाँले केही कुराहरू अनुमति दिन्छ परमेश्वरले हामीलाई बारेमा सबै विशेष भन्नुभयो छैन, तर उनी जस्तै के हामीलाई भन्नुभयो छ. हामीलाई थाहा छ उहाँले राम्रो, र बुद्धिमानी, र सिद्ध. उहाँले पहिले नै सिद्ध कि. त्यसैले म के गर्न सक्नुहुन्छ सबै उहाँलाई विश्वास छ, ती पीडितहरूका लागि प्रार्थना, र कुनै अवस्था हामी परमेश्वरको चल्न सक्दैन भनेर भयानक छ भनेर सम्झना.
किनभने पनि परिस्थिति सबैभन्दा मन wrenching मा, हामी परमेश्वरको आवश्यक सबै पाउन सक्नुहुन्छ. उहाँले हाम्रो मित्र र हाम्रो रक्षक छ, तर त्यहाँ थप छ.
म तपाईंलाई रुन, हे प्रभु;
म भन्छु, "तपाईं मेरो शरणस्थान हो,जीवित देशमा मेरो भाग। "
दाऊदले परमेश्वरले आफ्नो भाग भनिएको. यो शब्द भाग एक शेयर अर्थ. त्यसैले यो अंश आफ्नो शेयर उल्लेख सक्छ - के त्यागेका थियो आफ्नो भाग. यो मतलब सक्छ इंसाफ से तिम्रो हो कि एक विशेष पुरस्कार. त्यसैले आफ्नो वर्तमान अवस्थामा, दाऊदले केही छ. उहाँले अब आफ्नो घर टाढा र कुनै राजाको राम्रो गौरव मा छ.
त्यसैले तिनले यसो भन्दै गर्नुपर्छ, "म एक भाग छैन, अंश, एक इनाम. परमेश्वरको, तपाईं मेरो इनाम हुनुहुन्छ. तपाईं मेरो धन हुनुहुन्छ. तिमि मेरो सबै हौ!"परमेश्वरले आफ्ना सबै थियो.
मेरी श्रीमती र म भनिन्छ यो हप्ता ESPN यो वृत्तचित्र हेरिरहेका थिए भङ्ग. यो वृत्तचित्र एक समयमा करोडपति थिए खेलाडीहरूलाई थियो, तर फेला आफूलाई बिल्कुल भङ्ग. यी मान्छे केही शाब्दिक लाखौं गरे, तर घरहरू मा यो सबै उडायो, कार, लुगा, र एक महंगा जीवनशैली. तिनीहरूले कुराहरू भने बस्ने, धन-सम्पत्तिले, माल उनको सम्पत्तिहरू थिए. अनि जब तिनीहरू यो सबै नष्ट, तिनीहरूले के गर्न थाहा थिएन. आफ्नो भाग गएका थिए.
त्यसपछि पावलले प्रेरित जस्तै एक मान्छे त्यहाँ. फिलिप्पी मा जसले सामग्री हुन सिके गर्नुपर्छ भन्छन्, उहाँले धनी वा उहाँले गरिब छ कि. तपाईं गोप्य थाहा चाहनुहुन्छ? उहाँले साँच्चै आवश्यक सबै ख्रीष्टको थियो भनेर थाह थियो. उहाँले चाहन्थे सबै ख्रीष्टको थियो. उहाँले सबै फाल्नु उहाँले ख्रीष्ट हुन सक्छ कि इच्छुक थियो. परमेश्वरले आफ्ना धन थियो. तपाईं बिन्दु प्राप्त गर्न चाहँदैनन्?
A.W रूपमा. Tozer आफ्नो पुस्तक परमेश्वरको धावक राखेँ, "आफ्नो धन लागि परमेश्वरको मानिस एक मा सबै कुराहरू छ।"
ख. आनन्द पैसा आधारित छैन
यो प्रकाश मा, हाम्रो आनन्द हाम्रो बैंक खाता मा आकस्मिक हुन सक्दैन. हाम्रो आनन्द र शान्ति अप जान र हामी महसुस आर्थिक कसरी स्थिर तल सक्नुहुन्छ, जो एक प्रलोभनमा कहिलेकाहीं छ. हामी परमेश्वरको मा रक ठोस विश्वास को प्रकारको आवश्यक, कि प्रदान गर्न कठिन काम गर्दछ, तर त्यो पनि परमेश्वरको पैसा भन्दा बढी भरोसा. तपाईं पैसा भरोसा गर्न सक्छौं, तर यो खराब विचार हो. त्यहाँ उडा वा छैन भनेर सक्नुहुन्छ चोरी पैसा कुनै रकम छ. पैसा पछिल्लो छैन, तर परमेश्वरले हुनेछ. उहाँले हाम्रो धन हुनुपर्छ, पनि समस्या को समयमा.
पैसा भन्दा परमेश्वरको prioritizes तरिकामा तपाईं कसरी आफ्नो काम गर्न सक्नुहुन्छ? आफ्नो इच्छा र पैसा को पीछा गर्छ, परमेश्वरको आफ्नो खोज छ लङ्गडा र lackluster हेर्न बनाउन? त्यसो भए, परमेश्वरको साँच्चै आफ्नो धन हुन सक्छ. तपाईं आफ्नो साँचो इनाम रूपमा उहाँलाई देख्न सक्छ.
अब परमेश्वरले हामी साँच्चै हाम्रो अन्य आवश्यकता सबै गायब भन्न छैन आवश्यक सबै छ भन्दै. र यो आफ्नो अन्य आवश्यकता सबै बेवास्ता गर्न सुरु गर्न एक कल छैन. तर यो एक कल आफ्नो सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता थप निर्भर छ.
ग. जीवित को भूमि
तपाईं दाऊदले परमेश्वरको जीवित देशमा आफ्नो भाग छ भन्छन् कि नोटिस. उहाँले यसो भन्दै परमेश्वरले र म सबै सबै म यस जीवनमा अहिले आवश्यक छ. त्यसैले तिनले यसो भन्दै होइन परमेश्वरले अर्को जीवनमा मात्र आफ्नो धन. उहाँले अहिले यसो गर्नुपर्छ, परमेश्वरको म आवश्यक सबै छ.
म यहाँ हामी चाहनुहुन्छ सबै छ नगर्ने आज हामीलाई केही छन् थाहा, र शायद छैन सबै हामी आवश्यक. तर तपाईं परमेश्वरको छ भने, प्रोत्साहन गर्न. र आफ्नो सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता पहिले नै ख्रीष्टमा पूरा गरिएको छ कि परमेश्वरको प्रशंसा.
हामी कमी जस्तो हामी महसुस हुँदा पनि, हामी ख्रीष्टमा आवश्यक सबै पाउन सक्नुहुन्छ.
एक. सुपर हिरो
सुपर हिरो चलचित्र अहिले एक ठूलो सम्झौता हो. तपाईं हेर्न हरेक दिन त्यहाँ एक नयाँ सुपर हिरो चलचित्र हो. नौकर, कोरस, माकुरा मानिस, Monkeyman ... बस तपाईं थिए अझै पनि ध्यान भने देखेर. त्यसपछि तपाईं जस्तै कार्य चलचित्र अन्य प्रकार छ लिएको र जेम्स बण्ड. हामी चलचित्र यी प्रकार मन, किनभने हामी सबै असहाय देखिन्छ जब दिन बचाउन सक्ने जीवन भन्दा ठूलो नायक द्वारा मोहित हुनुहुन्छ. खैर दाऊदले यहाँ परमेश्वरको यस्तै चित्र पेंट. पद छ हेर.
मेरो कराउँदै सुन्न,म लागिपरेको आवश्यकता छु;मलाई पछि लाग्न गर्नेहरूलाई मलाई उद्धार, तिनीहरूले मलाई लागि पनि बलिया हुन्छन्.
ख. लागिपरेको आवश्यकता
उहाँले महसुस कसरी दाऊद फेरि परमेश्वरको बताइरहेका. उहाँले लागिपरेको खाँचो छ. दाऊद आफैले अन्तमा छ. त्यहाँ उहाँले वा अरू कसैलाई उसलाई बचाउन के गर्न सक्नुहुन्छ कि केही छ. उहाँले समस्यामा छ. र यो परमेश्वरको जान्छ कि यो समस्यामा छ. फेरि दाऊद परमेश्वरको बारेमा थाह. उहाँले परमेश्वरले असम्भव गर्छ भनी उहाँलाई थाह. उहाँले पहिले नै देखेको चाहन्छु परमेश्वरले उहाँले लडेको चाहन्छु को लडाई को केही आफ्नै जीवनमा असम्भव के. परमेश्वरको भालू दिन सक्छ भने, र दिग्गज, र आफ्नो हातमा सेनाले, त्यसपछि पक्कै पनि तिनले एक आत्म-आसक्त राजा देखि डेलिभर गर्न सक्नुहुन्छ.
तर हेर्न, के तपाईं आवश्यकता हुनुहुन्छ थाहा छैन, यदि तपाईं केहि नसोध्नुहोस्. मेरो छोरा भोजन बाहिर रुन्छिन्, उहाँले भोक महसुस र थाह किनभने उहाँले खाना आवश्यक. दाऊदले कि लागिपरेको आवश्यकता महसुस र यो परमेश्वरको पुकारा गर्न उहाँलाई जान्छ. उहाँले तिनलाई पछि लाग्न गर्नेहरूलाई उहाँको लागि पनि बलियो छन् भन्ने जान्नुहुन्छ. उहाँले मात्र परमेश्वरले उहाँलाई यस विशेष अवस्थामा स्वतन्त्र सक्छ भनेर थाह थियो.
र तपाईं दाऊदले कसरी सोध्छन् नोटिस. उहाँले यस मद्दत गर्न योग्य छ भने दाऊद सोध्न छैन. पद एक मा उहाँले माग्दै गर्नुपर्छ भन्छन् "कृपा।" उहाँले उहाँले योग्य के प्राप्त छैन भनेर सोधेर गर्नुपर्छ, तर यसको सट्टा केही उहाँले योग्य छैन: छुटकारा. र हाम्रो प्रार्थनाको सबै एउटै हुनुपर्छ. नम्र भई तपाईंले पनि कमजोर हुनुहुन्छ भनेर चिन्न. हामी केहि योग्य छैन. तर हामी परमेश्वरको सोधेर छौं हामीलाई दया छुटाउन.
अक्सर म यो जस्तै स्थितिमा जसले एक मित्र कसरी मदत गर्न सक्छ आफैलाई सोध्न. स्पष्ट, म सिर्फ "परमेश्वरको पर्याप्त छ" भन्न र आफ्नो अवस्था विश्वास गर्र्ने व्यति गर्न चाहँदैनन्. मलाई थाहा गर्न मात्र कुरा तिनीहरूलाई स्थान प्राप्त गर्न छ जहाँ दाऊदले छ. एक चर्च रूपमा यो तरिका हामी लागिपरेको आवश्यकता को समयमा प्रत्येक अन्य सेवा गर्न सक्छन्. तिनीहरूले उहाँलाई लागि आफ्नो आवश्यकता पहिचान गर्दा तिनीहरूलाई आफूलाई अन्त प्राप्त गर्न र थप उहाँलाई भरोसा. तिनीहरूलाई लागि प्रार्थना, तिनीहरुलाई माया गर. अक्सर भनेर हामी के गर्न सक्नुहुन्छ सबै छ.
ग. सहायता माग्न आज्ञा
दाऊदले अरू कुनै चलिरहेको विचार गर्न को लागि यो मूर्खता हुनेछ, यो अवस्था बाहिर स्पष्ट थियो जब आफ्नो, र अरूलाई नियन्त्रण. एउटै हामीलाई साँचो छ, तैपनि हामी अन्यत्र कहिलेकाहीं चलान. तर उहाँलाई आउन हामीलाई भनिएको छ.
…समस्या को दिन मा मेरो पुकारा; म छुटकारा हुनेछ, र तपाईंले मलाई आदर गर्नेछ. (भजन 50:15)
परमेश्वरले आफूलाई भन्दा र माथि उद्धारक रूपमा धर्मशास्त्र फेरि प्रकट. परमेश्वरले लाल समुद्र मा गरे के कस्तो? यूसुफको जीवनमा के? असंख्य लडाई के? जब सबै असम्भव देखिन्छ, परमेश्वरको अझै पनि उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ. त्यहाँ वैध उहाँलाई विरुद्ध खडा गर्न सक्ने कुनै शत्रु हो. सेनाले लड्न, पहाड दण्डवत्, र बतास र छालहरू उहाँको उपस्थिति मा बन्द. र उहाँको ट्रयाक रेकर्ड अविश्वसनीय छ. उहाँले पनि हामी हाम्रो पाप देखि छुटकारा ठूलो लम्बाईहरू गए.
यो भजन मा प्रार्थना, यसको दुःख र जोडतोडले, बाइबल अर्को प्रार्थनाको मलाई सम्झना दिलाउँछ. वास्तबमा, प्रार्थना व्यक्ति यो भजन लेखे जो मानिस को एक धेरै पछि सापेक्षित. यो गेतसमनीको बगैंचामा येशूको प्रार्थनाको मलाई सम्झना दिलाउँछ. येशूले क्रूसमा गइरहेको थाह. अनि उहाँले pleads परमेश्वरको, त्यहाँ अर्को तरिका हो भने र मूलतः उहाँलाई सोध्छन्. उहाँले अगाडि उहाँलाई थियो कि दुखाइ देखि वितरण गर्न चाहन्छ. आफ्नो वेदना रगत चुहाउनुभयो कि त गहिरो थियो.
परमेश्वरले येशूलाई अगाडि उहाँलाई थियो कि पीडा र विश्वास नलाग्दो दुःख बाट छुटकारा थिएन. अनि येशूले भाग्ने प्रयास गरे. उहाँले यस उहाँले के गर्न आए के थियो थाह थियो. येशू क्रूसमा मृत्यु. अनि जब येशूले क्रूसमा हङ, तपाईं र मलाई हुनेछ भनेर छैन उहाँले पीडित थियो. उनी प्रतिबद्ध छैन कि पापको लागि दण्ड लिएर थियो. उहाँले एउटा सिद्ध जीवन जिउनुभयो, उहाँले परमेश्वरको आहत थिएनन्. उहाँले दाऊदलाई मन थियो, तपाईं वा, वा मलाई. हामी पवित्र परमेश्वरको आहत गरेका पापी हुनुहुन्छ. उहाँले एक पापी थिएन, अहिलेसम्म उहाँले त्यस क्रूसमा एक पापी मृत्युको मृत्यु. उहाँले मृत्यु भन्दा दिइएको थियो, हामी वितरित गर्न सकिएन भनेर.
र उहाँले हामीलाई भनिन्छ गर्नुपर्छ, आफूलाई छुटाउन छैन, तर नायक भरोसा गर्न हामीलाई प्राप्त गर्न आउनुभएका. हामी यो युद्ध जित्न छैन, हामीले पहिले नै छ जो एक अपनाउँछन्. उहाँलाई विश्वास. उहाँलाई विश्वास. उहाँलाई आफ्नो जीवन दिन.
यो सत्य हो, के तपाईं साँच्चै ख्रीष्टमा भरोसा गर्नुभएको छैन भने, परमेश्वरको समस्या को समयमा आफ्नो मित्र छैन. उहाँले सुरक्षा प्रतिज्ञा छैन. उहाँले आफ्नो धन वा आफ्नो उद्धारक हुन प्रतिज्ञा छैन. मसीहीहरूले परेशान पटक मार्फत जाने, तर हाम्रो कथा छुटकारा समाप्त हुन्छ. तपाइँको गर्छ?
ई. छुटकारा कारण
मलाई मेरो जेलबाट,म आफ्नो नाम प्रशंसा सक्छ। त्यसपछि धार्मिक किनभने मलाई आफ्नो भलाइको मेरो बारेमा भेला हुनेछ.
यहाँ उहाँले वितरण गर्न चाहन्छ किन स्पष्ट बनाउँछ, किन उहाँले स्वतन्त्र हुन चाहन्छ - किनभने उहाँले आफ्ना उद्धारक परमेश्वरको प्रशंसा गर्न चाहन्छ. उहाँले परमेश्वरले आफूलाई बन्द देखाउन लागि अर्को मौका रूपमा यो देख्नुहुन्छ.
क्रिश्चियन, तपाईं के परमेश्वरले तपाईंलाई छुटकारा छ जब कस्तो प्रतिक्रिया? म धेरै सोच्न सक्नुहुन्छ, धेरै पटक म दुःखको हुँदा महसुस र कृपा लागि परमेश्वरको बिन्ती गरे. यो संसारको शाब्दिक अन्त थियो जस्तै म महसुस. अनि परमेश्वरले मेरो प्रार्थनाको जवाफ. र म यति खुसी थियो. र म पूर्ण रूपमा परमेश्वरको बारेमा भूल. म उहाँको प्रशंसा गरेनन्. म उहाँलाई आदर गर्नुभएन. म उहाँलाई बारेमा भूल. र पनि उहाँले गर्नुभयो के भूल, जो निरर्थक देखिन्छ.
म एक सानो बच्चा थियो जब, मेरो वर्षको हाइलाइट क्रिसमस थियो. र मेरो जन्मदिन यसलाई अतिरिक्त विशेष थियो त्यसैले पनि यस समय वरिपरि थियो. जीवनमा यो बिन्दुमा तपाईं धेरै छैन. तपाईं cheerios पायो, तपाईं naptime पायो, र तपाईं क्रिसमस पायो. म टिभीमा ठूलो पाङ्ग्रा विज्ञापनहरु देखे र म जस्तै थियो, "यो छ म Gotta।" म एक ठूलो पाङ्ग्रा पायो. र म शायद आनन्द आँसु बगाएको लाग्छ.
यदि म महिना र महिना भनेर मागे अहिले यो अनौठो हुनेछ, तर जब म विद्यालयमा फिर्ता पायो र मान्छे म पायो के मलाई सोधे, म यो उल्लेख गर्न भूल? यसलाई कसरी अनौठो छ, हामी कृपा छ परमेश्वरले निवेदन गर्न सक्ने, तर दिन पछि यो भयो कहिल्यै भने बिर्सन?
हामी जे यसलाई परमेश्वरको कृपा सम्झना र कृतज्ञ हृदय खेती गर्न लिन्छ के गर्नुपर्छ, यो journaling वा अन्यसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ कि. यसलाई जे लाग्छ के.
भजन अन्तमा, दाऊदले उहाँलाई बारेमा भेला संग धार्मिक भन्छन्. उहाँले उहाँको भलाइ लागि परमेश्वरको प्रशंसा रूपमा उहाँले अर्थ, अन्य विश्वासीहरूलाई सामेल हुनेछ. यो के हामी अनुग्रहको यी साक्षी-वचन साझा रूपमा आइतबार रात मा के छ. हामी परमेश्वरको भलाइ को सुन्न र हामी एक अर्को वरिपरि भेला र सँगै उहाँको प्रशंसा. के ठूलो उद्धारक.
कुनै परमेश्वरले तपाईंलाई प्रदान असक्षम छ कि त भयानक अवस्था छ. जब कुनै एक छुटकारा गर्न सक्नुहुन्छ, परमेश्वरले आफ्नो उद्धारक छ. उहाँलाई चलान.
म एक बच्चा रूपमा सम्झना, मेरो आमाबाबुले सबै समाधान सक्ने सोच. यो साँच्चै के भयो कुरा थिएन, आमा र पिताजी समाधान गर्न सक्छ यो. म छैन छिमेकीको घर जाने सपना देख्यो होला, वा नातेदार कल. म आमा र पिताजी गए, किनभने तिनीहरूले मलाई मिल्यो. मलाई थाहा थिएन कसरी, तर म तिनीहरूले मलाई थियो थाह थियो.
हामी childlike विश्वास यस प्रकारको आवश्यक. मान्छ कि विश्वासको प्रकारको, कुनै कुरा के समस्या, म के आवश्यकता लागि परमेश्वरको जान सक्नुहुन्छ. गरेको प्रार्थना गरौं.
कैथी • अप्रिल 16, 2016 मा 6:28 छु • जवाफ
राम्ररी भनिएको! धन्यवाद, भाइ,
मार्ग • जनवरी 23, 2018 मा 9:25 छु • जवाफ
परमेश्वरले तपाईंलाई आशिष सक्छ म चिन्दिन. तर म यो शिक्षा परमेश्वरले मलाई यो लेख मार्फत बोल्छ म समस्या मेरो समय छु मेरो लागि धेरै समय सुहाउँदो छ भेटिएन, उहाँले म यो अचम्मको छ पढ्दै छु गर्दा तपाईंलाई थाहा हुनुपर्छ मलाई म रोइरहेको थियो उठाएर भनी तपाईं पनि know.Thank छैन भनेर आफ्नो सेवा स्पर्श कुनै